နည်းပညာနှင့်သီတင်းရပ်ဝန်း: Android Vs iOS (သင်ဘာကိုရွေးမလဲ)
Apple ရဲ့ iPhone Generation များဟာ အခုအချိန်ထိ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကောင်းဆုံး စမတ်ဖုန်းအဖြစ်အသိအမှတ်ပြုထားကြတဲ့ဖုန်းအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် အခုနောက်ပိုင်းမှာ
Google ရဲ့Android Operating System သုံးဖုန်းများဟာ ဖုန်းဈေးကွက်ထဲမှာ အများအပြားနေရာယူလာပါတယ်။ အဲဒီလိုပဲGoogle ရဲ့ Android OS သုံးဖုန်းများ နဲ့ Apple ရဲ့ iOS
စနစ်သုံးဖုန်းများဖြစ်တဲ့ iPhone တို့ဟာလည်း အဓိကပြိုင်ဘက်များဖြစ်လာကြပါတယ်။OS နှစ်ခုလုံးက အခုလောလောဆယ်မှာ အသုံးအများဆုံး နဲ့ နာမည်ကြီး Mobile Operating System
ဖြစ်ကြပြီးအားသာချက် အားနည်းချက်ကိုယ်စီတော့ ရှိကြပါတယ်။Android OS ဟာ iOS ကိုအဓိကယှဉ်ပြိုင်လာတဲ့ OS တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ Apple အနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင် Android ကို သူတို့ရဲ့
အဓိကကျတဲ့စနစ်တစ်ချို့ကို ကူးယူအသုံးပြုထားတယ်လို့တရားစွဲဆိုထားပါတယ်။ Apple ရဲ့ Android အပေါ်ထားတဲ့ မုန်းတီးစိတ်အကြောင်းကို ကွယ်လွန်ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ Apple ရဲ့
ဦးဆောင်သူဖြစ်တဲ့Steve Job ဟာ ကွယ်လွန်ခါနီးမှာ Android OS ဟာ သူတို့ရဲ့ iOS ကို အကုန်လုံးနီးပါးကူးယူထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် Android OS ကို ကျဆုံးဖို့ရာသာအလိုရှိတယ်လို့
Steve Job ရဲ့အတ္တုပတိစာအုပ်မှာရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ Android OS ကိုအပြီးတိုင်ကျဆုံးစေဖို့အတွက် Apple ကုမ္ပဏီပိုင်ငွေကြေးအားလုံးကိုပင် သုံးစွဲဖို့လိုအပ်ပါက သုံးစွဲရမည်ဖြစ်ကြောင်းကို
ပြောခဲ့တယ်လို့ ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒါဆိုရင် Android OS နဲ့ iOS တိုက်ပွဲဟာ ပိုမိုပြင်းထန်လာဖို့သာရှိပါတယ်။ သူတို့ ဘယ်လိုပဲပြင်းထန်ပါစေ ၊ အနိုင်အရှုံးဟာ သုံးစွဲသူတွေပေါ်မှာသာမူတည်ပါတယ်။
အဲဒီတော့ Android OS နဲ့ iOS တို့ ဘာတွေကွာလဲ ၊ ဘာတွေပိုကောင်းလဲဆိုတာလေ့လာကြည့်ရအောင်။ Android OS နဲ့ iOS တို့ကဘာတွေကွာခြားသလဲ ?
iOS ဆိုတာကတော့ Apple ရဲ့ Mobile Operation System တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ iOS ကို Apple ကထုတ်လုပ်တဲ့ Mobile Device တွေဖြစ်တဲ့ iPhone,iPad,iPod touchများမှာသာအသုံးပြုပါတယ်။
iOS နဲ့ iOS ကိုအထောက်အပံပေးမယ့် System တစ်ခုလုံးကို ကို Apple ကုမ္ပဏီကပဲ ထုတ်လုပ်ပါတယ်။ Android OS ကတော့ Google ကထုတ်လုပ်တဲ့ Mobile Operation System ဖြစ်ပါတယ်။
Android OS ဟာ open sourceAndroid OS ကိုအထောက်အပံပေးမယ့် System ကို မူရင်းထုတ်လုပ်သူ Google ကုမ္ပဏီသာမက Android OS ကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုမယ့် အခြားသော Mobile ကုမ္ပဏီများကလည်း
ပြင်ဆင်ရေးသားနိုင်ပါတယ်။တခြား Android OS ကို free version အနေနဲ့ထုတ်ဝေတာဖြစ်ပြီး Android နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မယ့် မည့်သည့်ကုမ္ပဏီမှ ဖုန်းမဆို Android စနစ်ကို ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ Android OS စနစ်
ကိုတောင်မှစိတ်ကြိုက်ပြင်ရေးခွင့်ပေးထားပါတယ် ။ သုံးရတာ ပေါ့ပါးမှုမှာတော့ နှစ်ခုလုံးက အတူတူလောက်ပါပဲ။ သုံးရတာလည်းလွယ်ကူကြပါတယ်။ ပိုပြီး နိမ့်ပါးနေကြတဲ့ အချက်ဆိုတာတော့ iOSေ၇ာ Androidေ၇ာမှာ မရှိကြပါဘူး။ Application အသုံးပြုချောမွေ့မှုအပိုင်းမှာရော Android နဲ့ iOS ကဘာတွေကွာခြားလဲ?
Application ကွာခြားမှုအနေနဲ့ကတော့မရှိတော့သလောက်ပါပဲ။အရင်တုန်းက iPhone မှာသာသုံးလို့ရတဲ့ application တော်တော်များများကလည်း အခု Android OS အတွက်ထွက်ရှိနေပါပြီ။
ထူးထူးဆန်းဆန်း Application တော်တော်များများတောင် Android မှာပိုများနေပါသေးတယ်။ အဲဒီတော့ ကွာခြားမှုအနေနဲ့အဓိကပြောရမှာကတော့ ဘယ် OS က Application ပိုများလဲဆိုတာမဟုတ်တော့ဘဲ
Application သုံးစွဲရတဲ့နေရာမှာ ဘယ် OS က ပိုမိုချောမွေ့လဲဆိုတာကို ယှဉ်ရတော့မှာပါ။ ဒီနေရာမှာတော့ iPhone ကတစ်ပန်းသာပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ iOS ကို အသုံးပြုခြင်းနဲ့ အသုံးပြုခွင့်ပေးထားတာ
iPhone,iPad စတဲ့ Apple ရဲ့ Device တွေသာဖြစ်လို့ပါပဲ။ iPhone ဆိုတာကလည်း version တစ်မျိုးထုတ်လိုက်ပြီဆိုရင် (ဥပမာ-iPhone 4) ဘယ်လောက်ဖိုင် size ကြီးတဲ့ Application, game ပဲဖြစ်ဖြစ်
iPhone,iPad စတဲ့ Hardware အနိမ့်အမြင့်မရှိ တန်းတူ Device တွေ အတွက်ထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်လို့ iPhone မှာဆော့လို့ရတဲ့ဂိမ်းဆိုရင် တခြားဘယ် iPhone,iPad မှာမဆို နှေးကွေးခြင်းမရှိ Application ကောင်းရင်ကောင်းသလိုလျင်မြန်ချောမွေ့စွာ
သုံးနိုင်မှာပါ။ Android သုံးဖုန်းတွေက(မော်ဒယ်အမြင့်ဆုံး Android ဖုန်းတွေမပါ) အဲဒီနေရာမှာ iPhone ကိုမယှဉ်နိုင်ဘူးဖြစ်သွားပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Android OS ကိုအသုံးပြုတဲ့ဖုန်းက အမျိုးအစားအနေနဲ့ အများကြီးရှိသလို
Android OS သုံးဖုန်းတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံး Hardware ကွာခြားမှုတွေကလည်း မတူကြပါဘူး။ ဥပမာ- ကုမ္ပဏီတစ်ခုကထုတ်တဲ့ Android OS သုံးဖုန်းတစ်လုံးဟာ စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ အမြန်နှုန်းအနေနဲ့ 256 MB သာရှိမယ်ထားပါတော့
ဆော့ချင်တဲ့ ဂိမ်းက ဖိုင် size ကလည်းကြီးပြီး RAM လိုအပ်ချက်ကလည်း အနည်းဆုံး 512 MB လောက်မှသာရှိမှရမယ်ဆိုရင်တော့ အဲဒီဂိမ်းကိုဘယ်လိုမှဆော့လို့မရပါဘူး။ ဆော့လို့ရရင်တောင်မှ ဂိမ်းကထစ်နေပြီး နှေးကွေးနေမှာပါ။
အဲဒီကျတော့ တခြား Processor1.5 GHz လောက်ရှိတဲ့ မော်ဒယ်မြင့် Android ဖုန်းတစ်လုံးကို အမြန်ပြေးဝယ်ရမလိုတောင်ဖြစ်နေပါတယ်။ ပြောချင်တာကတော့ Android စနစ်သုံးဖုန်းတွေက Hardware ပိုင်းကို တစ်ပြေးညီထုတ်လုပ်ထား
တာမဟုတ်တဲ့အတွက် Android OS အတွက်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ application တစ်ခုဟာ Android Device တိုင်းမှာ သုံးလို့ရမှာမှန်ပေမယ့် Hardware ကွာခြားချက်ပေါ်မှာလိုက်ပြီး သုံးစွဲရတာကွာခြားသွားမှာပါ။
ငွေကြေးအနည်းငယ် (သို့)အသင့်တင့်မျှသာတတ်နိုင်တဲ့လူတွေအတွက်ရော ?
တကယ်လို့ သင်ဟာ ဖုန်းဝယ်ဖို့ငွေကြေးအများကြီးမသုံးချင်ဘူး ၊ ဒါပေမယ့် application တွေကိုတော့ ကောင်းကောင်းသုံးချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Android ကိုရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ Android OS ကို
သုံးထားတဲ့ ဖုန်းအမျိုးအစားတွေက ဈေးနည်းနည်းနဲ့ဖုန်းတောင်ရနိုင်တယ်လေ။ ဒီလိုပြောလို့ Android သုံးဖုန်းတွေက တန်ဖိုးနည်းဖုန်းတွေလို့ထင်မသွားပါနဲ့ဦး။ အခုပြောတာက ငွေကြေး အများကြီးမသုံးချင်သူတွေအတွက်ပါ။
ဈေးကြီးတဲ့ hardware အလန်းစား မော်ဒယ်မြင့် Android ဖုန်းတစ်ချို့ဆို iPhone ထက်တောင် Hardware ပိုင်းမှာသာပါသေးတယ်။
Android စနစ်သုံးမော်ဒယ်မြင့်ဖုန်းတွေရဲ့ Hardware နဲ့ iPhone ရဲ့ Hardware ဘယ်ဖုန်းက Hardware ပိုင်းမှာပိုသာလဲ ?
အခုနောက်ပိုင်းမှာ Apple ရဲ့ iPhone တွေကို အဓိကယှဉ်ပြိုင်လာတဲ့ဖုန်းကတော့ Samsung ရဲ့ Galaxy Series ဖုန်းဖြစ်တဲ့ Samsung Galaxy S2 ပါပဲ။ Samsung Galaxy S2 iPhone4မှာဆိုရင် Processor အမြန်နှုန်းက 1 GHz ပဲရှိပါတယ်။
ကျန်တဲ့ကွာခြားချက်တွေကတော့ အောက်က နှိုင်းယှဉ်ဇယားမှာလေ့လာကြည့်နိုင်ပါတယ်။
အပေါ်က နှိုင်းယှဉ်ဇယားကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် hardware ပိုင်းမှာ Galaxy s2 ကတောင် နည်းနည်းပိုသာနေပါတယ်။ အပြင်ပန်းအနေနဲ့ကြည့်ရင်ကို Screen size က iPhone4က ၃ လက်မခွဲပဲရှိပါတယ်။ Samsung Galaxy S2 ရဲ့
Screen Size က ၄လက်မခွဲပါ ။ ကဲ.ဒါဆိုရင် iPhone 4S နဲ့ Samsung Galaxy S2 နဲ့ရော ဘယ်သူက ပိုသာမလဲလို့ မေးကြမှာပါ။ အဲဒါဆိုရင်တော့ iPhone 4S နဲ့မှ အတူတူလောက်ဖြစ်တာပါ။ iPhone 4S နဲ့ Galaxy S2 ရဲ့ နှိုင်းယှဉ်ဇယားကို
ဒါတောင် တခြားမော်ဒယ်မြင့် နောက်ဆုံးထွက် hardware အမြင့်အလန်းစားတွေနဲ့ဆင်ထားတဲ့ HTC ရဲ့ Android ဖုန်းတွေဖြစ်တဲ့ Sensation XL တို့ Sensation XE တို့နဲ့ မယှဉ်ထားသေးပါဘူး။ Security ပိုင်းမှာရော Android OS နဲ့ iOS ဘယ် OS ကပိုသာလဲ ?
iOS ရဲ့ System ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေအကုန်လုံးကို Apple ကုမ္ပဏီရဲ့ Developer တွေကပဲထုတ်ပါတယ်။ အပြင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှမပါပါဘူး။ ဆက်သွယ်ရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာမျိုးကလွဲလို့ပေါ့။
ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံး file တွေပို့ချင်တယ်ဆိုရင်တောင် iDevices တွေရဲ့ BlueTooth စနစ် iPhone,iPod,iPad အချင်းချင်းသာရပါတယ်။ Security ပိုင်းမှာတော့ iOS က ပိုကောင်းတယ်လို့ မိုဘိုင်းပညာရှင်များက
သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ အဲဒီနေရာမှာတစ်ခုပြောစရာရှိတာက iOS က Security မှာတော့ သူများထိုးဖောက်လို့မ၇အောင် အဆင့်မြှင့်တင်ပြီးတော့ ထုတ်ပါတယ်။ ဥပမာ- Jailbreak လုပ်မရအောင်လိုမျိုးပေါ့။ အခုနောက်ပိုင်း
တကယ်လဲ Jailbreak လုပ်ဖို့ အရင် iOS version တွေထက် ခက်ခဲလာပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း နောက်ဆုံးမှာ Jailbreak လုပ်ခံရတာပါပဲ ။ Android ရဲ့ ဖုန်းအချင်းချင်း ချိတ်ဆက်မှုပိုင်းကတော့
Android ဖုန်းအချင်းချင်းပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ Android မဟုတ်တဲ့ဘယ်ဖုန်းနဲ့မဆိုလည်း Data ချိတ်ဆက်ပို့လို့ရပါတယ်။ Security ပိုင်းမှာတော့ ပုံမှန်ပါပဲ။ အင်တာနက်က hacker တွေရဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ်မှာတော့
Android OS စနစ်မှာပါတဲ့ Wifi ကွန်ရက်စနစ်ရဲ့ အားနည်းချက်ကိုတွေ့ရှိပြီးအဲဒီကနေတစ်ဆင့် User ရဲ့ အချက်အလက်များကိုခိုးယူကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ကြာင်း သိရပါတယ်။ ပိုက်ဆံနဲ့ပေးဝယ်ရတဲ့ application တွေကို Cracked လုပ်ပြီး free သုံးချင်တယ် ။ အဲလို app တွေထည့်ဖို့ ဘယ် OS က အဆင်အပြေဆုံးလဲ ?
ပိုက်ဆံနဲ့ပေးဝယ်ရတဲ့ application တွေကို Cracked လုပ်ပြီး မိမိရဲ့ iPhone,iPad ထဲကိုထည့်ဖို့ဆိုရင် iPhone,iPad ကို jailbreak လုပ်ထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ မြန်မာဖောင့်ထည့်ဖို့လို ဟာမျိုးတွေကိုေ၇ာပေါ့။
jailbreak မလုပ်ရင် cracked လုပ်ထားတဲ့ application တွေ ဂိမ်းတွေကို ထည့်သွင်းဆော့ကစားနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ Android မှာတော့ Cracked လုပ်ထားတဲ့ application တွေကိုထည့်ဖို့ ဖုန်းကို ဘာမှလုပ်စရာမလိုပါဘူး။
ဒီအတိုင်းထည့်လို့လဲရပါတယ်။ Android မြန်မာဖောင့်လိုမျိုး ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ System ရဲ့ Permission ကိုပြင်ပြီးမှ (root လုပ်ပြီးမှ)ထည့်ရပါတယ်။ Android မှာ System က ထည့်ခွင့်မပေးတဲ့ ၊ သာမန် user တွေကို
ပြင်ဆင်ခွင့်မပေးတဲ့ System တွေကို access ရအောင် Permission ရအောင်လုပ်ဆောင်ခြင်းကို root လုပ်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ root လုပ်တယ်ဆိုတာကလည်း အခုပြောခဲ့တဲ့ font ပြင်တာမျိုးတို့ ၊ System ကို ပြင်ဆင်မှသွင်းလို့ရတဲ့
application ကိုသွင်းချင်မှသာ root လုပ်ဖို့လိုတာပါ။ cracked လုပ်တဲ့ application ကိုသွင်းဖို့လောက်ကတော့ ဘာမှကိုလုပ်စရာမလိုပါဘူး။ အဲဒီအတွက်ကတော့ Android OS က ပိုမိုလွယ်ကူအဆင်ပြေစေပါတယ်။ ခြံငုံသုံးသပ်ရရင်တော့ Android OS နဲ့ iOS နှစ်ခုတို့မှာ အားနည်းချက် အားသာချက်ကိုယ်စီရှိကြတာကိုတွေ့ရမှာပါ။ သုံးစွဲသူအပိုင်းမှာ Android OS က အများဆုံးဖြစ်ပြီး Application သုံးစွဲရတာကောင်းမွန်မှု ၊OS ရဲ့အဆင့်မြင့်မှုအပိုင်းမှာတော့
iOS က အခုအချိန်ထိသာလွန်နေဆဲပါပဲ။ ဒီ OS နှစ်ခုက လောလောဆယ်မှာတော့ မိုဘိုင်းဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ရင် ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကောင်းဆုံး Mobile OS နှစ်ခုပါပဲ။ ဘယ် OS ကိုသုံးထားတဲ့ ဖုန်းကိုရွေးချယ်မလဲဆိုတာတော့ သင့်အပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်။